Vaovao - Ny tapany voalohany amin'ny fiofanana momba ny fitantanana fitsaboana Sanxin
Tamin'ny taona "epidemiana" manokana dia nanangona ny "Xinhuo" tamin'ny alàlan'ny sehatra rahona izahay ary tonga niaraka tamin'ny fianakavian'i Sanxin tamin'ny 28 Jona. Talent no fototry ny orinasa. Nanamafy hatrany ny sekretera jeneraly Xi fa ny talenta no loharanon-karena stratejika hahatanteraka ny fanavaozana ny firenena ary handraisana ny fandraisana andraikitra amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena. Ho an'i Sanxin, ny talenta sahaza an'i Sanxin no loharanon'ny fananganana fototra efa zato taona sy ny fototra iorenan'ny orinasa tsy ho resy.
Ny bokotra fiainana dia tokony hofehezina hatramin'ny voalohany. Raha diso ny bokotra voalohany, dia ho diso ny tohiny. Ho an'ny dingana fahenina an'ny drafitra Xinhuo an'i Sanxin, ny orinasa dia namolavola drafitra fiofanana amin'ny antsipiriany, izay voadona tam-pahakingana hatramin'ny andro voalohany niasana. Manomboka amin'ny fiofanana ivelany mankany amin'ny fiaraha-miasa amin'ny ekipa, manomboka amin'ny fifandimbiasam-bola mankany amin'ny drafitra asa, manomboka amin'ny kolotsaina orinasa mankany amin'ny rafitra fitantanana sy fanaraha-maso, manomboka amin'ny tantaran'i Sanxin ka hatrany amin'ny Sanxin ho avy, manomboka amin'ny mpitantana orinasa ka hatramin'ny sangany orinasa, ny mpampianatra anay dia samy mahalala ny zava-drehetra ary ny "Xinhuo" dia feno fanoloran-tena ary tsy sasatra.
Araky ny fomba fiteny taloha hoe "teraka ny ray, mampianatra ny mpampianatra.". Ny "mpampianatra" dia tsy ny fizarana fahalalana sy fahaiza-manao fotsiny fa mba hanampiana fahatsapana fiheverana sy fampianaran'ny ray aman-dreny. Tamin'ny tapany voalohany dia nanao lanonana lehibe tamin'ny fitsaohana mpampianatra izahay, izay tsy lanonana fotsiny, fa dingana iray lehibe ihany koa amin'ny asa ho avy Guan Peisheng. Araka ny fitenenana, "ny mihaino ny teninao dia tsara noho ny mamaky mandritra ny folo taona". Ny mpitaiza no ho mpitari-dalana antsika hanokatra ny toeram-piasana.
Fiofanana momba ny taranja Enterprise
▲ Mpampianatra sasany
“Amin'ny taratasy ihany no hahatsapanao ho miavaka amin'ny faran'ny andro, ary tsy maintsy ampiharinao izany.” Sanxin dia namaly tamim-pahavitrihana ary nametraka tamin'ny fomba feno ny fananganana tafika lehibe misy mpiasa mifototra amin'ny fahalalana, mahay sy manavao, nampandroso ny fanahin'ireo mpiasa maodely sy mpanao asa tanana, ary namorona lamaody ara-tsosialin'ny asa be voninahitra sy rivo-piainana matihanina fiezahana ho tonga lafatra . Ny zavatra nianarantsika dia tsy tokony hijanona ao anaty boky na any an-dohany fotsiny, fa tokony hampiharina amin'ny asa sy ny famoronana lanja. Tokony hahatratra ny firaisan'ny fahalalana sy ny fampiharana isika, hianatra fahalalana marina ary hahatakatra ny tena dikany amin'ny fampiharana, hampiroborobo ny hetsika amin'ny fahalalana ary hikatsaka fahalalana amin'ny fanaovana.
“Na dia akaiky aza ny lalana dia tsy azontsika atao; na dia kely aza ny raharaha dia tsy azo atao izany. ” Ny orinasa tsirairay, na lehibe na kely, dia atao ifotony ambany sy kely. Tokony ho henjana sy mahay mandanjalanja isika, hiasa mafy ary hiasa mafy. Xinhuo dia manomboka mirehitra ala, izay tsy hay tohaina. Ny olona Sanxin dia tokony ho hentitra amin'ny filamatra sy ny finoany, manana faniriana ambony, ho ambany tany, ary ho lasa mpanaraka ny toetr'andro. Amin'ny fampiharana mazava ny nofin'i Sanxin taonjato faha-100 nofinofin'izy ireo dia tokony hamoaka ny nofinofin'izy ireo izy ireo ary hanao ezaka tsy manam-pahataperana hanoratra toko maro loko eo amin'ny fampandrosoana ny fahasalaman'ny olona!